Sida sarkaalka sare ee isgaarsiinta ee McKnight Foundation, Dan Thiede wuxuu ka faa'iideysanayaa awoodda isgaarsiinta istiraatiijiga ah si loo hormariyo himilada Mu'asasada iyo yoolalka barnaamijkeeda.
Markii hore, Thiede wuxuu ku qaatay 14 sano inuu hago isgaarsiinta Kooxaha Kheyraadka Tamarta Nadiifka ah (CERTs), oo ah iskaashi horumariya tamarta la cusboonaysiin karo iyo hufnaanta tamarta ee Minnesota iyada oo loo marayo wacyigelinta bulshada, hawlgelinta, iyo barnaamijyada gargaarka. Inta lagu jiro wakhtigaas, wuxuu ballaariyay sheekooyinka iyo tebinta warbaahinta ee ku saabsan tamarta nadiifka ah ee Minnesota, wuxuu abuuray ilo iyo qalab muhiim ah, wuxuuna waday olole wax -ku -ool ah oo waxbarasho iyo ficil. Wuxuu kaloo taageeray isgaarsiinta dhowr iskaashi oo ka kooban ururo badan iyo shirar qorshaysan, dhacdooyin, iyo shirar kale.
Thiede wuxuu ka helay abaalmarinta 40 Under 40 ka Midwest Energy News ee 2017 dadaalkiisii sheeko-tamarta nadiifka ahaa. Wuxuu haystaa shahaadada masterka ee isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee Jaamacadda Minnesota iyo shahaadada koowaad ee qoraalka Ingiriisiga iyo juqraafiga ee Jaamacadda St. Thomas.